Mamisoa Isabelle Raveloaritiana: Nivady izahay noho ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraMamisoa Isabelle Raveloaritiana
Voadika ny 24 Jolay 2019 6:31 GMT
“Nentanim-pitiavana” (rômantika) kely ny fihaonako voalohany tamin’ny Global Voices. Nihaona voalohany tamin’ny Global Voices aho rehefa nandeha tany amin’ny biraon’i Jentilisa, ilay toniandahatsoratra ao amin’ny Global Voices Lingua Malagasy, satria niara-niasa tao amin’ny orinasa iray izahay tamin’izany fotoana izany. Hitako izy namaky sy nanao zavatra teo amin’ny solosainy ary hitako ny teny hoe Global Voices rehefa nijery ny efijerin'ny solosainy aho ary tazako ny lahatsoratra iray nosoratan’i Lova Rakotomalala mitondra ny lohateny hoe : “Mbola manalokaloka ao Gabon sy Maoritania ary Madagasikara ny Frantsafrika” ary tsikaritro fa nadika tamin’ny teny Malagasy ity lahatsoratra ity ary tena nahavariana ahy ny kalitaon’ny teny Malagasy nosoratan’i Jentilisa rehefa namaky ilay lahatsoratra nadika tamin’ny fiteny Malagasy aho. Nahatonga ahy hahatsapa ny maha-kanto sy ny maha-zava-dehibe ny fitenindrazantsika izany satria tsy dia raharahiana firy ny fiteny Malagasy eto amin’ny firenentsika [Madagasikara] satria mampiasa ny teny Frantsay isika matetika any amin’ny ankamaroan'ireo sekoly fanabeazana fototra tsy miankina, mampiasa ny teny Frantsay isika amin’ireo antontan-taratasim-panjakana toy ny Fitsarana, minisitera, ary ny birao-panjakana, sns noho ny maha-zanatany Frantsay ny firenena teo aloha. Nanomboka teo dia nahaliana ahy ny hahafantatra bebe kokoa momba ny Global Voices ary nanontany an’i Jentilisa ny mba hilazany izany amiko aho.
Tamin’ny alalan’ny fanazavany no nahenoko voalohany ny resaka bilaogy na ny bilaogera, ary nahaliana ahy izany ary indrindra ny Global Voices satria tia manoratra aho. Ny manoratra lahatsoratra amin’ny teny Frantsay no mahazatra ahy ao amin’ny diariko satria tsy nanana fifandraisana tamin’ny Aterineto tany an-tranoko aho ary tsy mbola nahalala momba ny fampahalalam-baovaon’olo-tsotra raha tsy tao amin'ny Global Voices. Saingy raha mbola te hanohy ny hamaky ireo lahatsoratra tao amin’ity tranonkala [Global Voices] teo anolan'ny masoko ity aho dia nanontany an’i Jentilisa aho raha afaka hanonta pirinty ireo lahatsoratra mba ho vakiako izy .
Ho valin’izany, nangataka ahy mba ho tonga any an-tranony izy raha te-hamaky lahatsoratra avy amin’ny Global Voices aho, satria nanana fifandraisana amin’ny Aterineto izy tany an-tranony ary mazava ho azy fa nanaiky aho. Nankany an-tranony matetika aho mba hamaky ireo lahatsoratra mahaliana avy amin’ny tranonkalan'ny Global Voices, ary mazava ho azy, fa izany ihany koa no nahafahako namorona ny kaontiko Facebook sy Twitter. Nihamafy ny fifandraisanay nanomboka teo ary nivady izahay ny farany. Nanampy an’i Jentilisa tamin’ny asany aho amin’ny maha-toniandahatsoratry ny Global Voices azy hatramin’ny nahavitan'ny mariazinay. Roa volana taty aoriana, hitany ny fandrosoako tamin’ny fanoratako teny Malagasy ary nanontany ahy izy raha toa ka te-ho mpandika teny ofisialin’ny Global Voices aho. Mazava ho azy, tsy misy tokony handavako ilay fangatahana ary nanaiky izany tamim-pifaliana sy tamim-pahafinaretana aho.“Tunisia: Prime Minister Resigns Following a Bllod Saturday” tamin'ny teny anglisy ary“Tonizia: Nametra-pialana ny praiministra taorian'ny vono-olona ny Asabotsy.” no fandikana lahatsoratra nataoko voalohany. Ary anisan’ireo mpandika teny mavitrika ato amin’ny Global Voices Lingua Malagasy aho hatramin’izao. Eny, mandika teny amim-pitiavana sy amim-pahafinaretana aho satria tsy vitan’ny hoe ahafahan'ny Malagasy manaraka ny vaovao iraisam-pirenena ihany izany fa indrindra indrindra manasongadina ny hatsaran’ny fitenintsika.
Niova ny ampahany tamin’ny fiainako hatramin’ny nidirako tato amin’ny vondrom-piarahamonina. Noho ny Global Voices no nahitako ny maha-zava-dehibe ny fahalalahana maneho hevitra, ny fizarana hevitra, izay nanosika sy nandrisika ahy hamorona ny bilaogiko amin’ny teny Frantsay sy Anglisy ary amin’ny teny Malagasy ; nahitako ny sila-panahiko : tsapako ny maha-zava-dehibe ny fiarovana, ny fampiasana, ny famelomana aina ny tenindrazantsika ary ireo zavatra maro hafa mahatalanjona ihany koa. Eny, tena mahatalanjona tokoa ny Global Voices, karazana fitahiana ho ahy izany ary iray tamin’ireo zavatra niainako nahafa-po ahy indrindra teo amin’ny fiainako. Tena mirehareha aho amin’ny maha-mpikambana ahy ao anatin'izany. Mirary taona zina maro kokoa ho an’ny vondrom-piarahamonina sy ireo mpikambana ao aminy aho.